Esteban Navarro जासूसी उपन्यासको लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: Esteban Navarro वेबसाइट।
एस्टेबान नावारो (मोराटाल्ला, १ 1965 XNUMX) एकदम प्रशस्त छ अपराध उपन्यास लेखक त्यो, एक दिन, उसले यो कुरा धेरै प्रकाशकहरु संग गरे पछि स्वयं प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्यो। मलाई प्रदान गरेको छ यो अन्तर्वार्ता जहाँ उसले हामीलाई सबै कुराको बारेमा थोरै बताउँछ। उनको कामबाट, उसका मनपर्ने लेखकहरू र पुस्तकहरू र उसले अहिलेका दृश्यहरू कसरी देख्छन्। म तपाईको दयालु व्यवहारलाई कदर गर्छु र मलाई भेट्न समय।
राष्ट्रीय पुलिस धेरै वर्षको लागि, पेशा छोडे उनले आफैंलाई पूर्ण रूपले लेखनको लागि समर्पण गरे। उसले पोस्ट गर्न सुरु गर्यो 2008 र विभिन्न प्रकाशकहरू जस्तै र्यान्डम हाउस, प्लेआ डे अकबा, वा डोस रोबल्ससँग काम गरे। तर यो ती अनौठो मामिलाहरु मध्ये एक हो आफैमा शर्त लगाउने निर्णय गरे र तपाईंको उत्पादनको नियन्त्रणमा यसमा सर्नुहोस् डेस्कटप प्रकाशन.
उसको जासुसी विधा शीर्षकहरू मध्ये - ऊ केहि लागि कपडा थाहा छ - हो अभ्यासको एक वर्ष, परम्परावादी, Penumbra वा एक पुलिस कहानी।
इस्तेबान नावारो: मैले पढेको पहिलो पुस्तक थियो लोगानको भाग्ने। मेरी आमाले यो मेरो लागि पाठकहरूको सर्कलमा किन्नुभयो, जब म आठदेखि नौ वर्षको थिएँ। मैले पहिले पढेको थिएँ तर मलाई लाग्छ कि त्यो पहिलो पुस्तक हो जुन मैले यसको सम्पूर्णतामा पढेको थिएँ।
मेरो पहिलो कहानी, जुन म राख्दिन, एक हुनको लागि थियो हास्य, किनकि मैले यो लेख्ने क्रममा कोर्ने प्रयास गरें। मलाई याद छ यो शीर्षक थियो उनको लोमो, र यो एक सेतो कॉलर चोरको बारेमा थियो जसले धूमधामको मनोरन्जनका लागि धनीहरूको सफा लुट्यो।
EN: म स्तब्ध भए एलिसिया सोध्नुहोस्। यो किताब एक किशोरको डायरी अनुसार लेखिएको हो जुन ओभरडोजको कारण मरेको थियो र उसको बाबुआमाले उनलाई बचाए पछि उनको अनुभव सार्वजनिक होस् भन्ने चाहन्थे। जब म बाह्र बर्षको थिएँ मैले यसलाई पढें र यसैले गर्दा यसले मलाई चोट पुर्यायो।
AL: तपाईं धेरै प्रशंसक लेखक हुनुहुन्छ। तपाईंको सबै उपन्यासहरूसँग के समान पोइन्ट वा विशेषता हुन्छ?
EN: मेरो उपन्यासको पहिलो पाठक म नै हुँ, यसकारण तिनीहरू मेरो मनोरन्जनको लागि लेखिएका छन्। म ती कथाहरू लेख्छु जुन म पढ्न चाहन्छु।
EN: Georges Simenonकुनै हिचकिचाहट बिना। र ओस्कर वाइल्ड, को लागि डोरियन ग्रेको चित्र, जुन म विश्वव्यापी साहित्यको एक उत्कृष्ट कृति मान्छु।
मा एल्ले रानी। त्यतिखेर ऊ एकदम जिज्ञासु चरित्र देखिन्थ्यो।
EN: मसँग शीर्षक नभएसम्म म कहिल्यै उपन्यास सुरु गर्दिन, म "शीर्षक नभएको" नामको कागजातमा लेख्न असमर्थ छु। र मसँग कुनै पढ्न छैन: मैले एउटा आर्म चेयरमा बसेर, टेबुलमा, कुर्सीमा, मैदानमा, समुद्री किनारमा र मेरी सासूको घरमा पनि आवश्यक परेमा पढेको थिएँ। म कागज, मोबाइल, किन्डल, आईप्याड वा जे पनि पढें जहाँ यो पढ्न सकिन्छ।
EN: म प्राय: यो भित्र गर्दछु मेरो सानो कार्यालय मेरो सानो अपार्टमेन्टबाट, जहाँ मसँग आर्मचेयर र बत्ती रहेको छ, टेबलको छेउमा जहाँ म मेरा उपन्यासहरू लेख्छु।
EN: मैले सबै पढें, तर यसको लागि मसँग एक विशेष भविष्यवाणी छ विज्ञान कल्पना।
EN: अहिले म पढ्दै छु सपनाको कथा, को आर्थर स्निट्जलर। र म आफैंलाई भेट्छु मेरो अर्को उपन्यासमा डुबे, जुन म प्रकाशित गर्न योजना गर्दछु नोभेम्बर यस वर्षको।
IN: I म स्वयं प्रकाशित, कि यो सबै भन्छन्। प्रकाशकहरू केवल पहिलेका ज्ञात लेखकहरू र लेखकहरूको खोजी गर्दछन्, तिनीहरूको कामहरू राम्रो छन् वा छैनन् भन्नेमा ध्यान नदिई। यस अवस्थामा उपन्यास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
EN: यस घडीमा मैले आफूलाई के अनुभव गरिरहेको छु भनेर लेख्नको लागि मैले आफूलाई दिइनँ, तर यो कुरा निश्चित छ कि अहिले देखि लेखिएका सबै थोकमा। त्यहाँ केही प्रतिबिम्ब हुनेछयति थोरै भए पनि, यस स of्कटको।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » एस्टेबान नावारो। जासूसी उपन्यासको लेखकसँग अन्तर्वार्ता